Myat Shu - 2011 August
You are here : Myat Shu » Archives for August 2011
Published By Myat Shu On Tuesday, August 30th 2011. Under သူတို့အာဘော်
၂၀၀၂၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ဤရက်ပိုင်းတွင် နိုဝင်ဘာထုတ် ဓန၊ မြန်မာ့ဓန၊ ရုပ်ရှင်အောင်လံ၊ ရွှေအောင်လံနှင့် ဒီဇင်ဘာအတွက် ကြိုထုတ်သော ရုပ်ရှင်တေးကဗျာတို့ကို ဖတ်ရသည်။ ကိုတာ၏ သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားစမြည်ကို ပြန်ဖတ်သည်။ ဆရာသိန်းဖေမြင့်၏ ကျွန်တော်ကြုံဖူးသော ကမ္ဘာကိုလည်း ပြန်ဖတ်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော ဂျာနယ် သုံးလေးအုပ်နှင့် ဆေးကုသရေးနှင့် ဆိုင်သော ဂျာနယ်သုံးလေးအုပ်လည်း ဖတ်ဖြစ်၏။ စာတည်းထံပေးစာ (Letters to Editor) သည် စာနယ်ဇင်းများအတွက် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာဖတ်ပရိတ်၏ အသံကို ကြားနိုင်သည်။ Feedback ကို ရနိုင်သည်။ သို့သော် အယ်ဒီတာက ရွေးချယ်ထည့်သွင်းမှသာ စာမျက်နှာပေါ် ရောက်ရမည့် စာအမျိုးအစား ဖြစ်သောကြောင့် အယ်ဒီတာက ... Continue Reading
ဖိုက်ဘာအင်တာနက်လိုင်းနှင့်အတူ VOIP ဖုန်းလိုင်းတွင် ဗီဒီယိုစနစ်ပါ တပ်ဆင်
Published By Myat Shu On Saturday, August 27th 2011. Under သတင်းတိုများ
ဖိုက်ဘာ အင်တာနက်လိုင်းတွင် တွဲဖက် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သော VOIP ဖုန်းလိုင်းတွင် ဗီဒီယိုစနစ် အသုံးပြု၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် တွေ့မြင်နိုင်မည့် နည်းစနစ်ကို စတင် ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့အတွက် ဖိုက်ဘာအင်တာနက်လိုင်း တပ်ဆင်ခွင့်ရရှိသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီက သိရသည်။ တယ်လီဖုန်း၊ ရုပ်သံလိုင်း၊ အင်တာနက် သုံးမျိုး ပါဝင်မည့် Triple Play စနစ်တွင် တယ်လီဖုန်းစနစ် VOIP (Voice Over IP) ၌ ၎င်းဗီဒီယိုစနစ် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ကာ ဖုန်းပြောသူ အချင်းချင်း ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရုပ်မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုလိုသူတွေ အနေနဲ့ Face to Face မြင်ရတဲ့ ဟဲန်းဆက်ကို သီးသန့်ဝယ်ယူ အသုံးပြုရမှာလို့ သိရပါတယ်။ ဗီဒီယို ... Continue Reading
အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှုစနစ်သစ်ကို စတင်လျက်ရှိ
ရတနာပုံ Web Portal တွင် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှု စနစ်သစ် (Online Billing Payment Exchange System) ကို စမ်းသပ်လျက်ရှိကြောင်း ရတနာပုံဝက်ဘ်ပေါ်တယ်မှ သိရသည်။ အဆိုပါ စနစ်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် ပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် စနစ်ဖြစ်ပြီး ဘဏ်မှ ငွေပေးချေရသော Banking Exchange မတိုင်မီ အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်မည့် ဘီလ်ဖြင့် ငွေပေးချေသော Billing Exchange ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ ၀န်ဆောင်မှုသော်လည်းကောင်း၊ ရတနာပုံ တယ်လီပို့၊ ရတနာပုံဝက်ဘ်ပေါ်တယ်၏ Billing စနစ်များမှ ပေးချေ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ အွန်လိုင်းပေါ်က ဈေးရောင်းဈေးဝယ်နိုင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေ ... Continue Reading
ဘိန်းမျို၍ အနိစ္စရောက်သည့် အကြောင်း
Published By Myat Shu On Saturday, August 27th 2011. Under အမှတ်တရ
… ရွှေမြို့တော် မန္တလေးတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် ၈ ရက်နေ့က ကုလားတိန် တစ်ယောက်သည် အရှည်ရှေးက ရေစက်ချ၍ ဘ၀မကွာ၊ ကြင်နာစုံမက်၊ မေတ္တာသက်၍၊ ပေါင်းဖက်ရှည်လျား၊ ချစ်မယားနှင့်၊ နှစ်အများ နေထိုင်၍၊ ၁၈ နှစ်ရွယ်၊ ၁၄ နှစ်ရွယ်၊ ကိုယ်ဝယ်သမီး၊ ကြီးပြင်းသည့်တိုင် ကျစ်လစ်သိမ်မွေ့စွာ၊ မေတ္တာစပ်ယှက်၊ ပေါင်းဖက်နေထိုင်ပြီးနောက်၊ စိတ်ဖောက်ယွင်းကွက်၊ မေတ္တာပျက်သဖြင့်၊ လက်ဘက်ကွမ်းစား၊ လင်မယားတို့၊ တရားရှင်းဖြတ်ရာ၊ ကြင်နာလင်က၊ ခင်မင်လှသောကြောင့်၊ ငယ်စဉ်ကချစ်၊ အလှသစ်ကို၊ ထပ်ရစ်မေတ္တာ၊ ရှိလိုပါကြောင်း၊ အကြိမ်ကြိမ် ခွင့်တောင်းသော်၊ ငယ်ပေါင်းသည်းအူ၊ လှတစ်ဆူက၊ မဖြူနိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းကို ဖယ်လေလျှင် သမီးနှစ်ယောက် ဖခင်မှာ ... Continue Reading
မန္တလေးမြို့တွင် ထူးကဲစွာ မိုးရွာသွန်း၊ မြေနိမ့်ရပ်ကွက်များ ရေလျှံ
Published By Myat Shu On Friday, August 26th 2011. Under သတင်းတိုများ
မန္တလေး သြဂုတ် ၂၃ မန္တလေးမြို့တွင် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်က ထူးကဲစွာ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် မြေနိမ့်ရပ်ကွက်များနှင့် လမ်းများအတွင်း ရေလျှံရေတင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မိုးရွာသွန်းမှုမှာ လွန်ခဲ့သော ၂၄ နှစ်အတွင်း မန္တလေးမြို့၏ သြဂုတ်လ၌ မိုးရွာသွန်းမှု မိုးရေချိန်ထက် ၁ လက်မခန့် ပိုပြီး သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ရွာသွန်းသော မိုးရေချိန်မှာ အထက်မြန်မာပြည် မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒဌာန၏ တိုင်းထွာချက်အရ ၇ ဒဿမ ၉၉ ရှိသည်။ ထူးကဲစွာ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် မန္တလေးမြို့ လမ်း ၃၀ တစ်လျှောက် ၆၂ လမ်းမှ ၇၈ လမ်းအထိ၊ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, August 26th 2011. Under ၀တ္ထု
“ဗျို့ ကိုသာဝ၊ အပြင်ကို ခဏ ထွက်ခဲ့စမ်းပါ” ဟု အိမ်ရှေ့ မှောင်ရိပ်ထဲမှ အသံတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာ၏။ ငွေဓားရ ကွက်သစ် ဆယ်အိမ်ခေါင်းမင်း ဦးသာဝသည် ထရံတွင် ထောင်ထားသော လှံကို ယူ၍ ထွက်ခဲ့၏။ မန်ကျည်းပင်ရိပ်တွင် ပန်းထိမ်တန်း ဆယ်အိမ်ခေါင်းမင်း ဦးရွှေလှကို တွေ့၍ “အမယ်လေး ခေါင်းမင်းရယ်၊ အလန့်တကြားနဲ့။ အကာလ ညအခါကြီးမှာ ဘာများ ကိစ္စထူးထွေ လာပါလိမ့်မလဲ” ဟု မေး၏။ “တခြား ဟုတ်ပါရိုးလားဗျာ၊ နယ်ပိုင်မင်းက လဆန်းနှစ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ သမီးအကြီးကလေးကို နားထွင်းမလို့တဲ့” “မင်္ဂလာသတင်းကို ကြားရလို့ ၀မ်းသာသဗျာ။ ကောက်လှိုင်းတိုက်ချိန်ကပဲ သားကလေးကို ကင်ပွန်းတပ်တယ်။ ဒီတုန်းကပေါ့။ ကျုပ် နွားပေါက်ကလေးကို ရောင်းပြီး ငွေဖလားကြီး ... Continue Reading
စာရေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့အကြိုက် ရေးရမှာလဲ
Published By Myat Shu On Tuesday, August 23rd 2011. Under သူတို့အာဘော်
စာရေးဆရာတွေကို “ခင်ဗျားတို့ စာရေးနေတာ ဘယ်သူ့အကြိုက် ရေးနေတာလဲ” လို့ မေးရင် အတော် အဖြေရ ကျပ်သားပဲ။ အဖြေတွေက အမျိုးမျိုး ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ “ကိုယ့်စာမူ ပါစေချင်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ စာစောင်၊ အယ်ဒီတာ အကြိုက် ရေးရတာပေါ့” “စာဖတ်ပရိသတ် အကြိုက် ရေးရတာပေါ့။ စာဖတ်ပရိသတ် ကြိုက်မှ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ စာစောင် ရောင်းကောင်းမယ်။ ဒါမှ အယ်ဒီတာ ကြိုက်မယ်။ အယ်ဒီတာက ထည့်ပေးမှ စာမူစွံပြီး နာမည်ရမှာပေါ့” အဲသည်လို အဖြေမျိုးတွေ ကြည့်ပြန်တော့လည်း “ဟုတ်ပေသားပဲ” လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကလောင်သွေးစ စာရေးဆရာများဆိုရင် သူတို့ရဲ့ စာမူကို အယ်ဒီတာက ထည့်ပေးမှ နာမည်ရပြီး စာရေးဆရာဆိုတဲ့ အနေနဲ့ ... Continue Reading
တမလွန်သုံး ရွှေငွေကြေးအတွက် ပေးဆပ်မှုများ
Published By Myat Shu On Monday, August 22nd 2011. Under သတင်းတိုများ
ကျောက်မဲမှာ လက်ဖက်လုပ်ငန်းပြီးရင် တောင်ယာခြံထွက် သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ကြက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့အပြိုင် တွင်ကျယ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ တရုတ်ရိုးရာ ခဲစက္ကူလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ခဲစက္ကူဟာ ကျောက်မဲမြို့ရဲ့ အဓိက ထွက်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်နေတာ ကာလအတန်ကြာပါပြီ။ သေဆုံးပြီးနောက် တမလွန်ဘ၀ ရောက်သွားတဲ့ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို ရည်စူးပြီး ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးအသွင် ဖန်တီးထားတဲ့ ခဲစက္ကူကို စားသောက်ဖွယ်အတိနဲ့ အခါအားလျော်စွာ ပူဇော်ကြတာဟာ တရုတ်တို့ရဲ့ ရိုးရာပါ။ ခဲစက္ကူ (ခဲ+စက္ကူ) မှာ ဦးစွာ ခဲ (ခဲစိမ်း) ကို မီးနဲ့ကျိုပြီး အထူတစ်ပဲ ကျော်ကျော်ခန့်အရွယ် ခဲပြားချပ်တွေအဖြစ် ပုံလောင်းပြီး၊ အဆိုပါ ခဲချပ်ကို ကျောက်ပြားပေါ်တင်ပြီး ပါးလှပ်သည်အထိ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ထုခတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက္ကူကျတော့ ... Continue Reading